Fitondram-panjakana Manambitamby mafy ny Katolika
Fanarenam-pirenena Hivory any Fianarantsoa ny Katolika
Hotanterahina ao Fianarantsoa ny 17 sy 18 aprily 2018 ny Atrikasa fanarenam-pirenena tena izy, karakarain’ny K3F (Komitin’ny Fahamarinana, Fandriampahalemana ary Fiadanana) ary hanasany ny Malagasy rehetra tsara sitrapo.
Fananganana ho olontsambatra an’i Lucien Botovasoa Mangataka fanohanana ny mpikarakara
Miomana fatratra amin’ny lanonana lehibe hanandratana an’i Lucien Botovasoa ho olontsambatra, hatao any Vohipeno ny 15 aprily ho avy izao ny eo anivon’ny fiangonana katolika.
Fiangonana sy firenena Potiky ny resa-bola sy fifampihatsaram-belatsihy
Matetika no andrenesana fifanandrinana sy tsy fifankahazoan’ny samy mpiangona amina fiangonana samihafa eto amintsika. Noho ny resa-bola amin’ny ankapobeny no miteraka izany.
Fiangonana METM Antohomadinika Raikitra ny savorovoro
Mihamafy hatrany ny disadisa misy eo amin’ny Komity Foibe an’ny Misiona Teratany Eto Madagasikara (METM) sy ny fiangonana Zoara Famonjena Antohomadinika. Rehefa tsy nahazo rariny teo anivon’ny fitsarana tamin’ny fanesorana ny mpitandrina ao an-toerana mantsy ny foibe dia nikiry nametraka mpitandrina vaovao indray ny alahady teo.
Finoana Katolika Martiry nahavita be i Ramose Lucien Botovasoa
Notontosaina ny sabotsy teo tetsy amin’ny EKAR Md François d’Assise Andravoahangy ny fampahafantarana ny tantaran’ny martirin’ny finoana katolika, Lucien Botovasoa, fantatra amin’ny hoe Ramose Lucien Botovasoa, amin’ny maha mpampianatra azy fahavelony.
Pastora Dr Rakotonirina David “Tsy afaka miafiafy ny fiangonana manitsy”
Tonga ny fotoana amin`ny fandinihana ny andraikitry ny fiangonana eo amin`ny lafiny filaminana sy fampandrosoana.
Leadership Chrétien de Développement Vonona hampita ny traikefa ho fampandrosoana ny firenena
Vonona hampita ny traikefany amin’ny mpiray tanindrazana ny “Leadership Chretien de developpement” ho fampandrosoana ny firenena.
Nofaranana tamin�ny alalan�ny fiombonam-bavaka teny amin�ny Esca Antanimena omaly alahady 6 novambra ny fankalazana ny taon-jaobily ho an�ny fivondronamben�ny Eveka sy ny mpino katolika.
Tonga niatrika sy nanome voninahitra ny lanonana ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Béni Xavier Rasolonirina. Tamin’ny lahateny nataon’ny Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, ny Arseveka Jean de Dieu Tsarahazana dia nisaorany ny fahatongavan’ny fitondram-panjakana notarihin’ny Praiministra Lehiben’ny Governemanta ary nilazany hoe “tsy adinonay ny mivavaka ho anareo mba ahafahanareo manatanteraka ny fanirian’i Kristy ho an’ny vahoakan’Andriamanitra tsy ankanavaka, araka ny hiram-pirenentsika manao hoe mba hiadana sy ho finaritra ka ho sambatra tokoa anie isika”. Nanambara kosa ny Lehiben’ny Governemanta tamin’ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety fa “mazava ny lalàmpanorenantsika fa fanjakana laika isika nefa ilaina ny fiaraha-miasan’ny rehetra, indrindra fa ny fiaraha-miasan’ny fanjakana amin’ny mpitondra fivavahana”. Nanamafy hatrany ny praiminisitra fa mitohy ny fiaraha-miasa miaraka eo amin’ny fiangonana sy ny fanjakana, ao anatin’izany ny eglizy katolika romanina. Anisan’ny tsy mitsitsy fitenenana amin’ny tokony hanitsian’ny mpitondra ny diany manoloana ny tsy mety eto amin’ny firenena ny fivondronamben’ny Eveka saingy toa ninian’ny mpitondra nomena lamosina hatramin’izay. Toa manambitamby indray anefa ny fitondrana raha dinihina amin’ny fihetsiky ny praiminisitra. Arofanina amin’ny fitantanana ny firenena ny raiamandreny am-panahy sy ny fiangonana ka tsy tokony hotsinontsinoavina ny fanehoan-keviny.